> Resource > Video > Sida loo Beddelaan MKV in 3GP
Hayso badan oo files MKV on your computer oo aad rabto inaad iyaga lagu wareejiyo si aad telefoonka mobile Raaxo ee u tegayaa? Haddii ay sidaas tahay, aad leedahay si loogu badalo MKV in qaab socon casriga ah. 3GP noqon kartaa qaabka doorashada ugu fiican ee aad. Waa qaab weel multimedia isticmaali 3G telefoonada gacanta, iyo sidoo kale qaar ka mid ah telefoonada 2G iyo 4G ah.
Si loogu badalo MKV in 3GP u telefoonada gacanta, a video Converter si sahlan loo isticmaalo loo baahan yahay in aad u. Maqaalkani waxa uu inta badan aad u muujinaysaa sida ay u badalaan files MKV for loo maqli karo ee wax telefoonada gacanta loogu jecel la MKV aad u fiican in Converter 3GP. Taasi waxay ku Video Converter u Win ( Video Converter u Mac ), taasoo si fudud u caawin karaan in aad loogu badalo qaab MKV in ku dhawaad ​​qaab kasta oo loogu talagalay qalab kasta oo la video tayo sare leh. Oo tallaabooyin faahfaahsan waa sida soo socota:
Talaabada 1: Download, rakibi oo ay maamulaan MKV si Converter 3GP
The version of video MKV si 3GP video Converter Mac iyo Windows waxaa si toos ah lagala soo bixi kartaa adigoo gujinaya xiriirka hoose. Ka dib markii la rakibey, kaliya waxa ay ku abuurtaan.
Fiiro gaar ah: Next, inaan qaato Windows version of app this tusaale ahaan si ay u muujiyaan MKV in ay diinta ka 3GP. Dadka isticmaala Mac, waxaad riixi kartaa halkan: users Mac "Guide of Video Converter u Mac .
Talaabada 2: files Import MKV in MKV si Converter 3GP
Si aad u dajiyaan files MKV in app this, u tag "Beddelaan"> "Add Files" button xitaa your computer disk adag tahay in la xulo files MKV doonayay oo iyaga ku shuban. Plus, taas app weyn taageertaa howlgal jiitaa-dhibic oo Dufcaddii diinta, si aad kale oo jiidi karaan hal ama dhowr MKV files barnaamijka si fudud.
Talaabada 3: Dooro qaab wax soo saarka
App Tani aad bixisaa ku dhowaad dhammaan daydo mobile phone caanka ah ee liiska qaabka wax soo saarka, sida taxane HTC, Motorola, Nokia, Samsung, Blackberry, Sony iwm Waxaad dooran kartaa qaab ku habboon wax soo saarka sida ay model phone u gaar ah. (Waayo, dadka isticmaala Mac, waxaad dooran kartaa qaab 3GP aad telefoonada gacanta.
Talaabada 4: Beddelaan MKV ee telefoonada mobile
Bilow si loogu badalo files MKV ee telefoonada adigoo riixaya ah "Beddelaan" button ee dhinaca midigta hoose ee this aad Video Converter u Win 's interface. Muddo intee leeg ayay qaadataa doonistii diinta gebi ahaanba ku xiran tahay tirada files MKV iyo waxqabadka your computer. Markii diinta la sameeyo, waxaad dajiyaan karaa files wax soo saarka si ay u telefoonada si aad u ciyaaro.